Gaadiidleyda oo xawaare badan ku mara waddooyinka la dayactiro - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Foto: TT samt Jennie-Lie Kjörnsberg/Sveriges Radio
Gaadiidleyda oo xawaare badan ku mara waddooyinka la dayactiro
La daabacay tisdag 7 juli 2015 kl 15.35
In ka badan labadiiba mid, baabuurta ayaa xowli badan ku ag mara meelaha ay ka socdaan dayactirka ee waddooyinka dalka, sida lagu oggaaday baaritaan ay si wadajir ah u sammeeyeen Raadiyaha Iswiidhan iyo ururka nabad-gelyada gaadiidka ee NTF.
Baaritaankan ama daraasadan oo lagu sammeeyay ila iyo 26 goobood oo ay ka socotdan howlo lagu dhisayo qeybo ka mid ah waddooyinka guud ahaan dalka, ayaa muujineysa in afar ka mid tobankii gaadiid keliya ay ku socdaan xadka xawaaraha ee lagu asyeeyay goobaha shaqada ka socoto ee waddooyinka.
Sida ay sheegtay waaxda gaadiidka ee Trafikverket, sanad walba, ku dhowaad 300 shil gaadiid ayaa ka dhaca goobaha shaqada dayactirka ka socoto ee waddooyinka dalka, halkaasi oo uu ku dhaawacma ama uu ku dhint.
Shilalaka ugu badan ayaa waxa ay ka dhacaan waddooyinka yar yar halkaasi oo socotada nugul-sida baaskiileyda ama dadka lugeynaya ay ka soo gaarto dhibaato. Sidoo kale iyana waxaa jira shilalka ka gaarsiinta ah oo loola jeedo in darawalka aad ugu dhowaado ama uu ku dhaco gaariga ka horreeya.
Gunnar Vikström, oo u qaabilsan hay'adda arrimaha la xiriira howlaha waddooyinka, ayaa sheegay in arrinkan uu yahay mid cabsi leh lloogana baahan yahay gaadiidleyda feejiganaan muujiyaan marka ay ku soo dhowaadaan meelo laga shaqeynayo oo wadada ah.